Amandla okuchithwa kwamanani
NgoSeptemba, 2014 Ezahlukeneyo
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendithetha nomnye wabacebisi bam malunga nokuba kubaluleke kangakanani ukuguqula ezona mbono zibalulekileyo kwisikimu somzobo. Nokuba yimephu yokuqonda, umzobo we-uml, itshathi yokuhamba, okanye ii-doodle ezilula kwi-napkin yokutyela, ubugcisa bokulungiselela izimvo buya kuba ngaphezulu kokonwabisa.
I-infographics iye yaba yimfashini ngeli xesha, kukhangelo lokubonisa iskimu seengcinga, umbono ongaqondakaliyo ngokusebenzisa iigrafu ezilungelelaniswe ngokuhambelana, ulingano okanye intshukumo; eluncedo ngakumbi kunombhalo wesiko kuphela, okanye amakhulu amaphepha wombono ekunzima ukuwuchaza kwimizuzu emihlanu. Yiyo loo nto ababonisi benolu hlobo lokuthetha njengakwizinto ezibhalwe kubemi, bekholelwa ekubeni wonke umntu uyabaqonda; kodwa kuthatha iminyaka eli-13 kamva.
Umzekelo we-Good Luck Amulets umzekelo we-Infographic umzekelo malunga nomxholo wemihla ngemihla.
Ukuba into ye-infographic ayihambi nengqondo yam eqhelekileyo, ayikundikhawuleli ukuba ndinike ikhredithi kwindlela eyakhiwe ngayo:
Ukuqala kwiintsikelelo zenhlanhla, i-particlerizes kwiintlanu ezintlanu ezifunwayo kwihlabathi:
Iqabunga lamagqabi amane
Emva koko iziqhelo zesithethe esithandwayo:
UBuddha onwabileyo ngesiTshayina
Ilitye le-jade nakwezinye iinkcubeko kunye nelifa le-quasi-extrateral heritage
Isihlangu esidala kumaxesha aphakathi
kunye nehote eFeng Shui
Ubuchule bubonakala bunomdla kum, nangona bunemigca kwaye buqikeleleka xa ujongene nesihloko sefilosofi. Kwinto endiya kuthi ndivumelane ngokupheleleyo nayo nge-infographic (ngokomxholo), yeyokuba kwimeko enye ithamsanqa, kwabanye iya kuba yexabiso. Ngokubanzi kuyilo, ndiyaluthanda kwaye luyandikhuthaza ukuba ndiluphonononge.
Kwelam icala, ukubhala ithamsanqa lam ngokuphefumlelwa imihla ngemihla kwizinto ezixabisa ekuhambeni kwexesha. Kulabo bathanda esi sihloko ngothando olungakumbi, kukho inhlanhla iincwadana zentlupheko.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Izifundo ezintsha ze-gvSIG kwi-intanethi
Post Next Bonisa idatha ye-QGIS ku-Google EarthOkulandelayo »